Chụ nta ụmụaka na Shotguns | Martech Zone
Chụ nta ụmụaka na Shotguns
Tuesday, June 24, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M ikpe mara bashing Manufacturing ebe a na Indiana dị ka nke na-esote Ihọd. Mgbe m na-eche n'ichepụta ọrụ, M na-ese a Ihọd na coveralls-eme ụfọdụ monotonous mmepụta nzukọ akara ọrụ ugboro ugboro. Otú ọ dị, nghọta m adịghị iche na ndị nọ n'afọ iri na ụma n'oge a.
Nlụpụta na lọjistik abụghị ọbụna okwu na-atọ ụtọ. Ha emeela agadi. Ha na-agwụ ike. O siri ike ile ha anya n'ụzọ ọ bụla ọzọ! Eziokwu bụ na n'ichepụta na lọjistik bụ ihe ọ bụla mana na-agwụ ike. Nlụpụta dị ka ngwa ngwa, ngwa ngwa ngwa ngwa. Ngwaọrụ dị ka ụdị sọftụwia dị mgbagwoju anya jikọtara ya na teknụzụ na-eto eto dị ka sistemụ ozi ala.
Ajụjụ bụ olee otu otu steeti si agbanwe ụzọ gọọmentị, ndị nne na nna na ụmụaka si eche maka gị mgbe ọtụtụ mmadụ amataghị ihe ị bụ? Chọpụta, branding mkpọsa, ahụkarị ahịa ka influencers dị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị nkụzi ga-enyere. Mana olee otu ị ga - esi chọọ ndị ị chọrọ iji rụjupụta ọtụtụ narị puku ọrụ na afọ ole na ole? Nke ahụ bụ ajụjụ a jụrụ m n'ehihie a… ihe a doozy!
Na steeti dị ka Indiana, ebe hubris nke kọleji afọ 4 biri (nke ahụ bụ ihe anyị ji mara ya, nri?), Kedu ka isi adọta ndị ntorobịa nwere ikike maka mmemme azụmaahịa na kọleji azụmaahịa afọ abụọ? Echere m na ọ bụ okwu atọ:
Gbaa mbọ hụ na ndị na-eme ihe ike na-amata eziokwu dị njọ nke ọnụ ọgụgụ. Imirikiti ụmụ akwụkwọ malitere na ụlọ akwụkwọ afọ 4 anaghị agụcha akara. N'ime ndị na-ejide akara bachelor ha… ọtụtụ na-enwe oge siri ike ịchọta ọrụ bara uru. Otu onye na - ekwu okwu banyere nwa akwụkwọ C + ha na mmemme nke afọ 4 nwere ike ọ gaghị emere ha amara. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo!
Gbaa mbọ hụ na ndị nne na nna matara ohere iji soro ụmụ ha kwurịta okwu. Na m nwa nwoke ụlọ akwụkwọ ọ bụ nwa akwụkwọ mediocre - ya mere ọ bụ ndị agha na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ya kwa ụbọchị. Bill malitere na IUPUI kama ugbu a, ọ ghọọla isi abụọ na isi na Math na Physics. Ọ na-amalitekwa ịdọrọ agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ iji duzie ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na Mahadum.
Isi okwu m na nwa m nwoke bụ nke a - ọ bụrụ na anyị enweghị ego maka agụmakwụkwọ ya, ọ ga-abụrịrị na ọ gwara ndị agha ngwa ngwa. Abụ m onye agha ochie na anaghị m akwa ụta maka mkpebi ahụ - mana amataghị m na m nwere nhọrọ na afọ ndụ ya. O (ma) nwere nhọrọ! Ọ bụrụ na usoro ihe omume afọ 4 arụpụtaghị, ọ ga-abụrịrị atụmanya ụlọ akwụkwọ azụmaahịa pụrụ iche (gịnị kpatara nke ahụ ji dị njọ?). Mụ na ya amaghị banyere nke ahụ.
Kpamkpam isi ihe ọ bụla ahịa mgbalị bụ lekwasịrị, ya onwe ya. Nke a bụ ebe roba na-aga n'okporo ụzọ. Achọghị m ịma otú ị na-emetụta influencers na ahịa ka Nne na Nna Dad ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na-ụmụaka ndị a nọ n'ụgbọ, ị ga-ada. Ya mere, olee ebe ị ga-ahụ ha? Facebook? Twitter? Ekwentị? Egwuregwu vidiyo? N'ụlọ akwụkwọ? Ndị Ntorobịa?
Ee, ị na-ahụ ha ebe niile. Anyị emeela ezigbo ọrụ na ịkụziri ụmụaka anyị ka ha wuo aha nke ha, chee echiche dị iche, chọta obi ụtọ… nke ahụ bụ ihe ha na-eme. Nwere ike ịchọta nwa m nwanyị na-ewere eserese na ịkekọrịta ha. Katie na-ejikwa vidiyo ya na-enyocha vidiyo. Na n'ezie, na Ozi ozugbo na ekwentị ya. N’oge ụfọdụ, ọ ga-eso ndị enyi ya zukọta ma gwuo egwu Nkume band.
My nwa blọọgụ (oge ụfọdụ), dị na Facebook ma sonyere ndị enyi ya ndị ọzọ egwu na MySpace. Na mgbakwunye na nke a, ị ga-ahụ ya n’ebe ụdị ọkacha mmasị ya dị, Egwuregwu Bean (ọ nwetara m risịrị) na Lọ Waffle… Ee, afflọ Waffle.
Ndị na-eto eto nwere nhọrọ taa ma na-alụ ọgụ maka ọdịmma nke ha. Ọ bụ mmadụ ole na ole n’ime ndị enyi nwoke na nwa m nwanyị na-enupụ isi dị ka anyị mere n’oge m bụ nwata. Ha emebiwo. Ha nwere ihe eji egwuri egwu. Ha nwere Internetntanet. Ha nwere ibe. Ha anaghị achọ ụdị ma ọ bụ na-achịkwa ha. Ha na-amasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ha choro izoputa uwa… ihe obula nke ahu putara.
Ppingbanye na ntorobịa n'oge a na-ewe ihe karịrị ụzọ ole na ole a na-eme nke ọma n'oge ochie. M na-echeta mgbe niile Nike na-eme bụ na-agba ọsọ ha Kachasị elu ugwu na ihe nkiri kụrụ ahịa. N'oge a, ụmụaka ahụ chọrọ ịchọta ụdị akpụkpọ ụkwụ ndị ọ na-enweghị onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị ga-achụ nta ụmụaka, ị ga-akawanye egbe. Na-achị Google, Youtube, Flickr, Facebook (nwere ike ịbụ obere nká), Myspace, ihe nkiri egwu, nnukwu ụlọ ahịa, egwuregwu vidio, ekwe ntị na Colọ Ahịa kọfị ma ọ bụ Waffle dị na mpaghara nwere ike ịbụ mmalite dị mma!
Ndụmọdụ m bụ na ọ ga-adị mfe inye ebe ụmụaka ga-anọ be kama ịga ebe ha na-. Amaara m otu ụmụ anyị si nwee ekele maka otu ndị ntorobịa mpaghara na nke Churchka ebe ha nwere ike ịkpa ike, kwue okwu, igwu egwuregwu vidio, ma ka aga-agwa ha nnukwu ozi. Ọ bụghị mgbe niile ka ha bịara ịnara ozi, mana ha bịara maka ibe ha! Ebe ahụ ekwesịghị ịbụ ntọala brik na ngwa agha, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ebe n'ịntanetị.
Echiche gị? Foto dị na nnukwu ọkwa na Teen Marketing dị na blog echiche.
Tags: ihe nkiri faviconogbako softwareakpachapuru anyaỌdịnaya Emailfavicongenerator favicongotomeeting ọzọire erewebex ozoWordPress
Douglas Karr Tuesday, June 24, 2008 Sunday, October 4, 2015
Usoro Mgbasa Ozi na Atụmatụ Azụmaahịa
Nwelite na Cisco I-Prize Finals
ihe na-adighi nma
Jun 24, 2008 na 12:32 AM
Akwa post! Na-enye m ihe ka m chee echiche, enwetala m ọtụtụ afọ tupu ụmụaka m abụọ eruo afọ iri na ụma, mana amaara m na ọ ga-efepụ tupu m mata ya. Echere m na otu n'ime ihe ndị kasị njọ anyị na-eme bụ inupụ ụmụaka n'ime kọleji mgbe ha na-adịghị njikere maka ya. Enwere nhọrọ ndị ọzọ: ndị agha, ndị ahịa, òtù ọrụ.
Jun 24, 2008 na 10:05 AM
Ọzọkwa, ọ bụghị mmadụ niile chọrọ ịnọ n'ọfịs ma ọ bụ ụlọ nyocha ụbọchị niile. Enwere ọtụtụ ụmụaka etinyere agbụ na tebụl kemgbe afọ 13 gara aga, ndị ga-akacha elu ma na-eme ihe ọzọ karịa ịpịnye ihe. Nlụpụta abụghị naanị maka ụmụ akwụkwọ C. Amaara m ụfọdụ ndị nwere ọgụgụ isi na ọrụ azụmaahịa ndị ga-ada ada karịa ime anụ ahụ.
Ọ na-eme m ka m chee echiche banyere Office Space ebe Peter mechara nwee obi ụtọ ịrụ ọrụ na ndị ọrụ mkpocha kama ịnọ na cubicle.
Jun 24, 2008 na 10:23 AM
Na-ezi ezi na m nwere olileanya na m na-ahụghị gafee dị ka na-ekwu na n'ụzọ ụfọdụ ọrụ ndị a bụ maka n'okpuru nkezi ụmụ akwụkwọ. Isi okwu m bụ ihe dị iche - ọrụ ndị a na-atọ ụtọ, na teknụzụ dị elu, na-eduga n'ịrụ ọrụ na-akwụ ụgwọ nke ọma NA Achọghị ogo ogo 4. Offọdụ n’ime ha anaghị achọrọ afọ 2!
Ọ bụ naanị ụlọ ọrụ eleghara anya. Onye ọ bụla na-eche na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma, ị ga-achọ oge Bachelor n'oge a. Ọ bụ ezie na m ga-ekwupụta na nke ahụ bụ ezigbo 'amụma mkpuchi', ọ nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ na-atọ ụtọ ma na-amị mkpụrụ maka onye na-eto eto chọrọ ọrụ ịma aka ma na-akwụghachi ụgwọ!
Daalụ nke ukwuu maka echiche gị!
PS: M hụrụ ụlọ ọrụ Office n'anya!
Jun 25, 2008 na 7: 35 PM
Nnukwu post doug.
N'ịbụ “otu puku afọ” m def. kwenye n'ihe nile ikwuru ebe a.
Izute ha ebe ha nọ, ma were egbe ahụ were akara coke. Are ga-achọ ya.
Akwụkwọ ozi Ibu Ibu PC ihe # $ @ # pụtara?